तुलसीपुर, बैशाख १६– ए बाबु पख्नुस् त ! तुलसीपुरको सल्यान रोडमा एक वृद्धाले भनिन् । सडकमा हिड्दै गरेका ती व्यक्ति टक्क अड्डिए । किनहोला भनेर ती व्यक्तिले सोचि नसक्दै हातमा समातेको पोलीथिनको झोलाको भित्र रहेको अर्को कपडाको झोलाबाट चम्चाले सातु दिदै गर्दा उनले के हो ? रुखो स्वरमा प्रतिप्रश्न गर्दै म खान्न भने ।
सातु हो बाबु धर्म हुन्छ खानुस । उनले त्यै पनि खाँदैन भने । वृद्धाले पैसा लाग्दैन खानुस के, बाबु खानुस भनेपछि उनले बल्ल सातु खानका लागि हात थापे । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन ।
कारण रहेछ, अक्षय तृतीया अर्थात सातु खाने दिन । यो दिन सातु खाएमा मनले चिताएको पुग्ने, दुर्घटनाबाट बच्ने, रक्खे हुने, अकालमा मृत्यु नहनुे भन्ने धार्मिक विश्वास छ । शनिवार अधिकांशले घरघरमा सातु बनाएर खानुका साथै छरछिमेकमा पनि बाँड्ने प्रचलन छ ।
तुलसीपुर ९ शिवपुर निवासी ८० बर्षीया सेति बस्यालले यसरी सातु बाड्न लागेको यो बर्ष समेत गरेर २७ बर्ष पुगे छ । खाँदा खुशी हुने गरेको बताउने ती वृद्धा बस्यालले नखाँदा भने मन दुख्ने गरेको बताउँछिन् । कतिपयले खाँदैन भनेर भाग्ने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछिन् ।
हरेक वर्ष विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म सातु बाँड्दै हिड्ने गरेको उनी बताउँछिन् । पृथ्वीमा बस्दा धर्म गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता उनलाई छ ।
‘पृथ्वीमा बस्दा जतिसक्यो धर्मकर्म गर्नुपर्छ,’ वृद्धा बस्यालले भनिन्, ‘पृथ्वी छोडेर गएपछि सुखशान्ति पाइन्छ ।’ जौ पिँधेर, तिल, कुमकुम, दुबो, कात्तिके मह, चिनी, गाईको दूध मिसाएर हरेक वर्ष सात पाथी सातु करिब ३÷४ सय जनालाई बाँड्ने बताइन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई एक चम्चा सातु बाँड्दै हिड्ने ती वृद्धाले जतिसुकै रुपैयाँ दिए पनि नलिने बताउछिन् ।